बाबुलाई ढोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्दा खर्च कति ? – Koshidaily
बाबुलाई ढोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्दा खर्च कति ?
access_alarms Koshi daily ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १४:४०	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वस्थ भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइ बालुवाटार पुगेपछि आफ्ना बाबुलाई ढोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्दा कति खर्च लाग्यो ?
मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । यही फागुन १९ गते अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार (फागुन ३०)साँझ डिस्चार्ज भएर वालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा गएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्ण स्वास्थ्यलाभपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा प्रेम कृष्ण खड्गाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा पाँच लाख खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा उठेको बिल सरकारलाई पठाउने उनले जानकारी दिए । सरकारलाई पठाएको बिलको भुक्तानी कसले गर्छ यसबारे थाहा नभएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक खड्गाले जानकारी दिए ।
यही फागुन १९ गते अस्पताल भर्नाका भएका प्रधानमन्त्री ओलीको २१ गते मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । उनलाई भान्जी समीक्षा संग्रौलाले मिर्गाैला दिएकी थिइन् । १२वर्ष अघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले दोस्रोपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको हो ।